Imibhalo kaJoe Intile Martech Zone |
Imibhalo nge UJoe Intile
UJoseph Intile unguMqondisi Wezobuciko kwa-InMarket futhi unolwazi lweminyaka eyi-10 + esebenza njengomklami wasendlini nowokuzimela, onguchwepheshe wokubeka uphawu, wokuphrinta nowokuqanjwa kwamaselula.
Yini iholide 2020 elisifundise ngayo ngamasu wokumaketha weselula ngo-2021
NgoMsombuluko, Januwari 11, 2021 NgoMsombuluko, Januwari 11, 2021 UJoe Intile
Akunakuphikwa ukuthi, kepha isikhathi samaholide e-2020 besingafani nanoma yimuphi omunye esake sabhekana nawo njengobuciko. Ngemikhawulo yokuhlukaniswa kwezenhlalo ephinde yabamba emhlabeni wonke, isimilo sabathengi sisuka ezinkambisweni zendabuko. Kubakhangisi, lokhu kuqhubeka nokusisusa kumasu wendabuko na-Out-Of-Home (OOH), futhi kuholele ekuthembekeni kokuzibandakanya kwamaselula nedijithali. Ngaphezu kokuqala ekuqaleni, ukukhuphuka kwamakhadi ezipho okungakaze kubonwe kulindeleke ukuthi kwandise leli holide